VaultPress သည် WordPress ကိုလုံခြုံစေသည် Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 4, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 9, 2011 Douglas Karr
ငါထိုင်နေတယ် Automattic Blog World Expo (siphoning power) ကိုပြသခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောစီမံကိန်းများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအပြောင်းအလဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် WordPress အဖွဲ့နှင့်များစွာစကားပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့အားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် လုံခြုံရေးနှင့် backups များ.
ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည် WordPress အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အချိန်အတန်ကြာပါဝင်ခဲ့ဖူးသော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မမြင်တွေ့ခဲ့ရသောပရိုဂရမ်များနှင့် application များအကြောင်းကိုကြားသိရဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် VaultPress။ VaultPress သည်သင် WordPress ၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအတွက်ဘလော့ဂ်၏လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အကြောင်းအရာ၏အရန်သင့်သိမ်းဆည်းမှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်သင်၏ WordPress ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ထဲသို့သင်ထည့်နိုင်သည်။
ဤတွင် VaultPress ၏ဗီဒီယိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
အခြားပြင်ပမှအရံ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲ၊ VaultPress သည် WordPress အယ်ဒီတာအတွင်းရှိအလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့ပင်၊ သင်ရေးသားနေစဉ်ပြင်ပအရန်ကူးခြင်းကိုအလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းပေးသည်။ အရမ်းအေးတယ်!
VaultPress ၏နောက်ထပ်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာသင်၏ WordPress ကုဒ်ထည့်သွင်းမှုတွင်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုစောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းကား၊ ၎င်း၏အားသာချက်မှာ WordPress ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော Automattic မိသားစုသည်သင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်ပလက်ဖောင်းကိုရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှုအားနည်းသော plugins များသို့မဟုတ် plugins များသည်ဟက်ကာများဝင်ရောက်ရန်တံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး WordPress အတွင်းရှိအခြားစာမျက်နှာများသို့ကုဒ်တွန်းပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏ site ကိုလူဆိုးများအတွက်တံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
VaultPress သည်လခပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် $ 15 ကနေအထိကြောင်းအစီအစဉ်များ (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်) တစ်လလျှင် $ 350 ။ ကျွန်ုပ် MyRepono ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်မလွယ်ကူသော plugin တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ငါ VaultPress ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။
Tags: အလိုအလျောက်မြဝတီVaultPresswordpress backups များ